शीर्ष5सर्वश्रेष्ठ शहर क्रिसमस खर्च गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > शीर्ष5सर्वश्रेष्ठ शहर क्रिसमस खर्च गर्न
शीर्ष5सर्वश्रेष्ठ शहर क्रिसमस खर्च गर्न
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा हंगेरी, ट्रेन यात्रा स्वीडेन, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा सल्लाह, यात्रा युरोप
पढ्ने समय:5मिनेट(Last Updated On: 30/01/2021)
2018 अन्त मा लगभग छ, जो केवल क्रिसमस नजिकै छ भन्ने अर्थ गर्न सक्नुहुन्छ! मान्छे अझै पनि यसको लागि तयार प्राप्त छैन, तर यात्री लागि, यो एक यात्रा योजना उच्च समय. तपाईंलाई क्रिसमस खर्च गर्ने अधिकार शहर खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई ढाकिएको भयो.
यस लेखमा तपाईंलाई क्रिसमस खर्च गर्न सबै भन्दा राम्रो शहर को एक विस्तृत सूची दिन हुनेछ. अरु के छ त, हामी तपाईंलाई त्यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ सबै रोचक कुराहरू बताउन छौँ, तर अधिक महत्वपूर्ण, रेल यी शहर प्राप्त गर्न कसरी.
त्यहाँ पर्वहरू धेरै पहिले सुरु रूपमा एम्स्टर्डम यो सूची मा एक विशेष स्थान छ. नोभेम्बर मा सुरु, मानिसहरू एम्स्टर्डम देखि सुरु क्रिसमस celebrate र अन्य सबै जाडो घटनाहरू.
को संग्रहालय शहर को केन्द्र मा वर्ग एक कहानी क्रिसमस गाउँ मा रूपान्तरणहरूलाई. यहाँ तपाईँले युरोप मा सबै भन्दा राम्रो क्रिसमस बजार को एक आनन्द उठाउन सक्छौं. यो भन्दा बढी क्रिसमस खर्च गर्न सबै भन्दा राम्रो शहर को रूपमा एम्स्टर्डम योग्य.
एम्स्टर्डम राम्रो यसको भव्य भवन र धेरै नहरहरुमा लागि जानिन्छ, तर शहर धेरै बढी प्रस्ताव. तपाईं आइस स्केटिङ आनन्द उठाउन सक्छौं, रोटेपिङ् सवारी, शानदार खाना र पेय को एक किसिम, र अधिक.
तपाईं पनि पनि दिन समाप्त पछि क्रिसमस आनन्द उठाउन सक्छौं. क्रिसमस पछि अर्को दिन, एम्स्टर्डम को मान्छे बक्सिङ दिन मनाउन.
तपाईं लगभग युरोप मा जहाँबाट रेल द्वारा एम्स्टर्डम भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ. केन्द्रीय स्टेशन जडान पेरिस, फ्रैंकफर्ट, ब्रसेल्स, लन्डन, ज्यूरिख, बर्लिन, प्राग, र अरु धेरै. त्यहाँ तिनीहरूलाई को भन्दा धेरै अरूलाई नियमित रेखाहरू छन् नेदरल्यान्ड मा शहर गर्न. त्यसैले तपाईं युरोपेली रेल संग चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई क्रिसमस खर्च गर्न सर्वश्रेष्ठ शहर को धेरै आनन्द उठाउन सक्छौं 1 यात्रा.
क्रिसमस खर्च गर्न सर्वश्रेष्ठ शहर, coldest छान्ने – स्टकहोम, स्वीडेन
यो चिसो हुन सक्छ, तर तपाईं अझै पनि तपाईं को लागि क्रिसमस स्टकहोम मा हुन चयन कि प्रेम छौँ. स्वीडेन को समयमा मा हुन देश छ जाडो बिदा को Swedes आफूलाई राम्रो होना किनभने.
शहर नै सुन्दर छुट्टी समयमा सजाया छ, र यो दुवै आधुनिक र परम्परागत कुरा प्रदान गर्दछ. यो एक शीर्ष छनोट उत्कृष्ट शहर को एक क्रिसमस रमाइलो गर्न रूपमा छ.
त्यहाँ तातो खाना र पेय संग सडकमा मा सबैतिर रोशनी र क्रिसमस बजार हो. तपाईं शहरको धेरै बेकरी को एक मा स्वादिष्ट ताजा सुखा दालचिनी बन्स वा gingerbreads प्रयास पागल छैन हुनेछु! स्वीडेन विभिन्न खाद्य विकल्प को बाटो मा धेरै प्रस्ताव छैन, एक पटक तपाईं कफी को एक हट कप संग एक दालचिनी रोटी प्रयास तर अरू केही गर्न चाहनुहुन्छ छौँ.
यसबाहेक, तपाईं युरोप मा सबै भन्दा सुन्दर पुरानो सहर मध्ये एक भ्रमण गर्न मौका प्राप्त. त्यसपछि तपाईं आश्चर्य मा विभिन्न र जटिल नहरहरुमा देख खडा गर्न सक्नुहुन्छ, नदी च्यानलहरू, र अधिक.
तपाईं स्वीडेन कोपेनहेगन मार्फत जडान रूपमा छ स्टकहोम गर्न रेल द्वारा युरोप मा धेरै स्थानबाट प्राप्त गर्न सक्छन्. यसबाहेक, तपाईं एक लिन चाहनुहुन्छ छौँ उत्तरी भागहरु केही गर्न तालिम देशको. जहाँ उत्तरी रोशनी को brightest र सबैभन्दा सुन्दर छन् भनेर हो.
बुडापेस्ट, हंगेरीको राजधानी र यसको सबैभन्दा सुन्दर शहर, लागि क्रिसमस खर्च गर्न सबै भन्दा राम्रो ठाउँ मध्ये एक छ धेरै कारणहरू. शहर डान्यूब नदीमा अवस्थित छ र केही प्रस्तावहरू प्रदान गर्दछ शानदार डुङ्गा सवारी. तपाईं नदी देखि ऐतिहासिक भवनहरु को लगभग सबै देख्न सक्नुहुन्छ.
यसबाहेक, तपाईं तेजस्वी Buda हेर्न हुनेछ महल र संसद भवन. कुराहरू लागि जाँदा तपाईं हिउँदमा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै छन्. को बुडापेस्ट पार्क बरफ रिङ्क मा स्केटिङ गर्न streetcars चढेर देखि, त्यहाँ सधैं यहाँ के कुराहरू धेरै छ. पनि, को Basilica मा Vorosmarty वर्ग मा क्रिसमस बजार र क्रिसमस निष्पक्ष भ्रमण गर्न नबिर्स.
यो एक Harry Potter पुस्तकबाट सीधा आए जस्तो देखिन्छ कि केन्द्रिय रेल स्टेशन केन्द्र छ. यो युरोप र थप मा प्रमुख शहर को सबै भन्दा बुडापेस्ट जडान. दुई अतिरिक्त स्टेशन पनि रेल लाइनको धेरै छ, बनाउने र बुडापेस्ट देखि यात्रा एक समीर.
क्रिसमस खर्च गर्न सर्वश्रेष्ठ शहर, अद्वितीय छान्ने – स्ट्रासबर्ग, फ्रान्स
स्ट्रासबर्ग छैन क्रिसमस खर्च गर्न मात्र सबै भन्दा राम्रो विकल्प छ, तर यो पनि क्रिसमस राजधानी हो. तपाईं क्रिसमस यो सुन्दर शहर गएर सम्झना गर्न सक्दैन.
स्ट्रासबर्ग दावा 400 वर्षीया क्रिसमस बजार, जो स्पष्ट यस शहर मा क्रिसमस को महत्व बताउँछन्.
यसबाहेक, त्यहाँ अन्य धेरै छ हेर्न र गर्न कुराहरू. तपाईं राजसी स्ट्रासबर्ग गिरजाघर वा imposing भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ 18th शताब्दीमा Palais रोहन. तपाईं पनि आश्चर्य मा हेर्न सक्नुहुन्छ साझेदारीको गाउँ नजिकै ठूलो क्रिसमस ट्री, वा शहर को केन्द्र वरिपरि घुमफिर. केही भन्ने मात्र कुरा तपाईंले यो जादुई शहर मा पट्टाइ लाग्ला कहिल्यै पनि छ.
स्ट्रासबर्ग पश्चिमी युरोप को केन्द्र मा स्थित छ, जर्मनी संग सिमाना मा. यसको स्थान यसलाई युरोप मा शहर को सबै भन्दा जडान गर्न सक्षम. त्यो पनि शहरमा एक रेल फेला धेरै सजिलो हुनेछ भन्ने हो.
पेरिस स्ट्रासबर्ग गाडिहरु गर्न
लक्समबर्ग स्ट्रासबर्ग गाडिहरु गर्न
नैन्सी स्ट्रासबर्ग गाडिहरु गर्न
बेसल स्ट्रासबर्ग गाडिहरु गर्न
क्रिसमस खर्च गर्न सर्वश्रेष्ठ शहर र बस्न राम्रो ठाउँ – जेनेभा, स्विट्जरल्याण्ड
एक युरोप मा सबै भन्दा राम्रो स्थानहरु, यदि छैन दुनिया, को जाडो समयमा, स्विट्जरल्याण्ड छ. त्यो किन जेनेभा छ, स्विट्जरल्याण्ड मा loveliest शहर को एक, क्रिसमस रमाइलो गर्न सबै भन्दा राम्रो शहर बीच निश्चित छ.
शहर पोखरी जेनेभा को बैंकहरू मा खण्डमा, र जाडो हुँदा, सम्पूर्ण ताल चमकिलो छ. रोशनी हजारौं नजिकैको पसलहरूमा देखि चमक, stalls, सार्वजनिक भवन, र क्रिसमस सजावट.
हामी क्रिसमस ब्लग खर्च गर्न सर्वश्रेष्ठ शहर लागि जेनेभा छानिएको कारण एक खाद्य प्रेमीहरूको पनि सहरका पूर्व रूपमा आनन्दित हुनुपर्छ भन्ने थियो-क्रिसमस बजार दुनिया भर देखि खाना प्रदान गर्दछ. अरु के छ त, तपाईं किनमेल जान सक्नुहुन्छ सडक मा हिड्ने, त्यसपछि सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्थलहरू केही जानुहोस्. यी समावेश को महल संयुक्त राष्ट्र को, सेन्ट पियरे गिरजाघर, पानी जेट, र अधिक.
त्यहाँ बर्न र ज्यूरिख जस्तै स्विट्जरल्याण्ड मा अन्य शहर बाट नियमित रेल जेनेभा तपाईं लाग्न सक्छ छन्. तथापि, रेल र इटाली ले जा को धेरै पनि छन्, फ्रान्स, जर्मनी, र अधिक. पटरिहरु जस्तै शहर देखि जाने लजेन, पेरिस, भेनिस, मिलान, राम्रो, भियना, र अरु धेरै. यसबाहेक, केन्द्रीय रेल स्टेशन शहर को धेरै केन्द्र मा छ.
ट्रेनबाट लियोन जेनेभा
जेनेभा गाडिहरु गर्न बर्न
त्यसैले त्यहाँ तपाईँले छ, क्रिसमस खर्च गर्न धेरै राम्रो शहर पूर्ण सूची. तपाईं थप जानकारी चाहनुहुन्छ भने रेल यात्रा र यी शहर देखि, स्वतन्त्र महसुस सम्पर्क बचत एक ट्रेन कुनै पनि समयमा.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-christmas%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml र तपाईं परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ / डे गर्न / fr वा / ES र अधिक भाषा.
#हंगेरी #traveleurope europetravel sweden सुझाव trainjourney Tranride रेल प्रशिक्षण सल्लाह रेल सुझावहरू रेल यात्रा ट्रेन यात्रा सल्लाह रेल यात्रा यात्रा ट्राभेलमस्टरडम travelfrance यातायात स्विट्जरल्याण्ड
5 रोम बाट दिन यात्राहरू इटाली अन्वेषण गर्न
ट्रेन द्वारा पूर्ण शुरुवात गाइड इटाली गर्न